जनता समाजवादी पार्टीका नेता उमाकान्त झाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रूपमा प्रक्रिया थालेको बताएका छन्। पूर्वमन्त्री समेत रहेका जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य झाले अहिले जसपाको प्राथमिकता मुद्दा फिर्ता,संविधान संशोधन लगायतका विषय मात्र रहेको बताएका छन् । सत्ता सहकार्य वा सरकार बनाउने,नबनाउने विषय गौण रहेको उनको कथन छ। प्रस्तुत छ, लोकान्तरकर्मी अजयअनुरागीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरनिकट मानिने जसपा नेता झासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि पहल गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेको छ। तर,जनता समाजवादी पार्टीलेहालसम्म पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। जसपा कहिलेसम्म अनिर्णित रहने हो ?
सरकार बनाउने कुराले हाम्रा लागि कुनै खासै तात्विक अर्थ राख्दैन। जसपाको अहिलेको विषय भनेको मधेश र मधेशीसँगको विषय मात्र हो। सरकार बनाउने कुरा गौण विषय नै हो। पहिलेदेखि नै रहँदै आएको कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीका सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइसहित २ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित विभिन्न जिल्लामा हाम्रो नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक सहितका विषय नै हाम्रो मूख्य सरोकारको विषय हो। सरकार हाम्रा लागि प्राथमिकताको विषय नै होइन। अहिलेको सरकारसमक्ष हामीले त्यो कुरा राखेका छौं। त्यसमाथि छलफल पनि अहिलेको सरकारसँग भइरहेको छ।
यही विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईंका पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरदेखि पार्टीले गठन गरेको कार्यदलसँग समेत गरीपटक-पटक कुराकानी तथा वार्ता समेत भइसकेको छ। उक्त वार्ताका क्रममा के कति उपलब्धि हासिल हुन सकेको छ?
मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा सरकार प्रमुखले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तथा दायित्व समेत भएका कारण अरूभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग नै प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी भइरहेको छ। त्यसका लागि हाम्रो पार्टीबाट पनि सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजी र लक्ष्मणलाल कर्णजीसहितको कार्यदल गठन भएको छ। उहाँहरूले नेकपा एमालेका सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, राजन भट्टराई सहितको कार्यदलसँग पनि पटक-पटक कुराकानी तथा गृहकार्य समेत गरिरहनुभएको छ। माननीय रेशम चौधरीको रिहाइसहित अन्य नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइको कुराकानी गरिरहनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री आफैंले पनि त्यस विषयमा गम्भीर चासो लिनुभएको छ। उहाँले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि चाल्नुभएको कुरा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ।
आवश्यक प्रक्रिया भन्नाले अहिलेसम्म के-केकदम चालिएको छ?
मुद्दा फिर्ता लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित कुन तहबाट के के गर्नु पर्ने हो त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्नु भएको छ। जस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्मलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। विभिन्न सरोकारवालासँग सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग पनि नियमितरूपमा समन्वय र सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। अब छिट्टै त्यसको परिणाम पनि आउछ।
कति दिन भित्रमा त्यसको परिणाम देखिन सक्छ?
दिन त भन्न सकिँदैन तर हामी आशावादी भने पक्कै छौं। किनभने उहाँ मात्र त्यस्तो व्यक्ति हो जसले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री मात्रै त्यस्तो अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो जसले काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले जसरी हामीलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ र काम पनि गरिरहनु भएको छ त्यसले हामीलाई पनि विश्वास गर्ने एउटा आधार समेत मिलेको छ। यति दिनभित्र नै ती सबै काम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त उहाँले पनि गर्नुभएको छैन तर उहाँले काम गरिरहेको कुरा हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छौं।
सत्ता सहकार्यका विषयमा पार्टीमा प्रस्टरूपमा दुई कित्ता देखिएको अवस्था छ नि ?
अलिकति भ्रामक कुराहरू पनि छन् । रेशम चौधरीजी पूर्व राजपाको नेता हो। राजपाबाट नै उहाँ चुनाव जित्नुभएको हो, त्यसैले हाम्रा अध्यक्ष ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजी रेशम चौधरीप्रति सकारात्मक हुनु स्वाभाविक हो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेर आएपछि पनि शपथ ग्रहण गराउनका लागि त्यही दुईजना नेताले ठूलो भूमिका खेल्नुभएको थियो। जति नजिकबाट यो विषयलाई हामी पूर्व राजपाका नेता तथा मधेशका जनताले बुझेका छौं, त्यति नजिकबाट वा भनौं भावनालाई अरु नेताहरूले कसरी हेर्नुभएको छ त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर, हामी पूर्व राजपाका लागि त रेशम चौधरीको रिहाइ प्रमुख सरोकारको विषय पक्कै पनि हो।
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलेत कांग्रेस,माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य हुनै नसक्ने भनिरहनु भएको छ। त्यसो हो भने जसपामा एकमततदेखिएन नि !
सरकार बनाउने विषयसम्म त हामी अहिले पुगेका नै छैनौं नि। मुद्दाहरू सम्बोधन गराउने विषयमा मात्र छौं। त्यो मुद्दाहरू सम्बोधन भइसकेपछि मात्र हामी सरकारको विषयमा कुरा गर्छौं। सरकार बनाउने विषय अहिले हाम्रो लागि प्राथमिकतामा नै छैन।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेपछि जसपामा पनि निर्णय गर्नका लागि दबाव त पर्छ होला नि !
अहिले नै भन्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि हामीसँग अहिलेसम्म कुनै शर्त राख्नुभएको छैन। विना शर्त उहाँले हाम्रो माग पूरा गर्ने भनिरहनुभएको छ। अर्कातर्फ हामी पनि निष्ठापूर्वक आफ्नो मागमा मात्र केन्द्रित छौं। अन्य विषयमा पछि कुरा गर्ने हो। यी मागहरूलाई जसरी पनि सम्बोधन गर्छु, समाधान गर्छु भनेर अहिलेको सरकारले भनिरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि विश्वास भएको छ।
ओली सरकारले ती सबै माग सम्बोधन गरेको खण्डमा ओलीजीसँग सत्ता सहकार्य गर्नका लागि नैतिक दबाब हुन्न र?
पहिले यो माग पूरा होस् त्यसपछि मात्र सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ। भविष्यको कुरा अहिले नै भन्नु हाम्रा लागि असान्दर्भिक पनि हो किनभने अहिलेसम्म हामी त्यो लेभलसम्म पुगेकै छैनौं। हाम्रो पार्टी र ओली सरकारबीच अनकन्डिसनल कुराकानी भइरहेको छ ।
के जसपा विभाजन हुन्छ?
हुँदैन। एक, दुई, तीन हुँदैन, किनभने विभाजन हुनका लागि यो पार्टी बनेको होइन। वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति बनाउने उद्देश्यले राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर जसपा बनेको हो। त्यसको कुनै पनि सम्भावना छैन।
माओवादी पार्टीले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने कुनै न कुनै पक्ष लिनुपर्छ होला नै । त्यस्तो अवस्थामा जसपाले कसको साथ दिन्छ त?
त्यहाँसम्म हामी अहिलेसम्म पुगेकै छैनौं।
त्यसपछि त राजनीतिक रूपमा निकासका लागि कुनै न कुनै बाटो त जसपाले समाउनुपर्ला नि! कि तटस्थ रहने ?
अहिले जे जति भएको छ त्यो हाम्रो कारण भएको होइन। नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण भएको हो। त्यसैले नेकपाभित्रको समस्यामा हामी हठात् आफ्नो वक्तव्य वा आफ्नो निर्णय वा विचार दिन मिल्दैन। आन्तरिक विवादमा हामी प्रवेश गर्ने कुरा पनि हुँदैन।